घरमा भुलेर पनि नराख्नुस यी सामाग्रीहरु, अन्यथा हुने छैन लक्ष्मीको वास ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/घरमा भुलेर पनि नराख्नुस यी सामाग्रीहरु, अन्यथा हुने छैन लक्ष्मीको वास !
घरमा केहि यस्ता सामानहरु हुन्छन जसलाई न त प्रयोगमा ल्याउन नै सकिन्छ न त फाल्न नै मन लाग्छ। वास्तुशास्त्रका अनुसार हरेक निर्जीव वस्तुमा नकारात्मक उर्जा हुने गर्छ। जसले परिवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र परिवारको उन्नति प्रगतिमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम गर्दछ।
त्यसैले घरमा टुटे फुटेका त्यस्ता केहि सामानहरु छन भने तुरुन्तै विस्थापन गरि हाल्नुहोस। वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा फुटेका , टुक्रिएका सामान र निर्जीव बस्तुलाई देखेर माता लक्ष्मी रिसाउने र घरमा आर्थिक समस्या देखिनाका साथै सौभाग्य प्राप्त नहुने बिश्वास गरिन्छ।